KANGAL DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Kangal Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Pascal the Turkish Kangal Dog oo 2 sano jir ah ayaa ku nool dalka Turkiga.
Turki Kangal Ey
Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' waa eey weyn, xoog badan, oo leh lafo culus, oo cabirkiisa iyo jaangooyooyinkiisuba ay si dabiici ah u kobceen iyadoo ay ugu wacan tahay sii wadida adeegsiga ay ka wado Turkiga ee ka ilaalisa ugaarsadayaasha Madaxa waa weyn yahay oo dhex dhexaad u ballaaran oo leh dhegaha dhibic. Ey Kangal ah oo si sax ah loo dheellitiray ayaa waxyar ka dheer (oo laga qiyaasay prosternum ilaa barta of badhida) ka dheer dheer (oo laga qiyaasay engegga ilaa dhulka), iyo dhererka lugta hore (oo laga cabiray barta xusulka ilaa dhulka) waa inay u dhigmaan waxoogaa ka badan kala badh dhererka eeyga. Dabada, oo sida caadiga ah la duubto, ayaa dhameystirta silhouette kala duwan. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' wuxuu leeyahay jaakad laba jibbaar ah oo dhex dhexaad ah oo aad u cufan. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' wuxuu leeyahay maaskaro madow iyo dhego madow oo jilicsan oo ka soo horjeedda midabka jirka oo dhan oo laga yaabo inuu u dhexeeyo iftiinka dun ilaa cirro. Nabarro sharaf leh ama daliillo kale oo dhaawac ah oo ka dhasha shaqada goobta ma aha in la ciqaabo.
Eyga caadiga ah ee loo yaqaan 'Kangal Dog' waa midka ugu horreeya uguna muhiimsan a eyga ilaaliyaha oo leh dabeecad u eg eeyahaas oo kale - feejignaan, dhul iyo difaac xayawaanka guryaha ku nool ama qoyska aadanaha ee ay ku xidhnayd. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' wuxuu leeyahay awood, xawaare iyo geesinimo uu ku kala dhexgalo ugana hor tago hanjabaadaha adhiga iyo ariga ee ay ku ilaaliso labada dal ee Turkiga iyo Adduunyada Cusub. Eeyaha Kangal waxay doorbidaan inay cabsi geliyaan ugaarsadayaasha laakiin waxay qaadan doonaan mowqif jireed xitaa weerari doonaan haddii loo baahdo. Eeyaha Kangal waxay leeyihiin feejignaan macquul ah eeyaha ajnabiga ah laakiin sida caadiga ah dagaal uma galaan dadka. Waxay xoogaa ku xayiran yihiin shisheeyaha, laakiin daacad iyo kalgacal ayey la yihiin reerka. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka eygaaga waxay noqon kartaa guul dhameystiran.
isku darka parson russell terrier chihuahua mix
Dhererka: Ragga 30 - 32 inji (77 - 86 cm) Dumarka 28 - 30 inji (72 - 77 cm)
Miisaanka: Ragga 110 - 145 rodol (50 - 66 kg) Dumarka 90 - 120 rodol (41 - 54 kg)
Eyga Kangal laguma talinayo nolosha guriga. Guriga gudihiisa waa mid aan firfircooneyn wuxuuna ku fiicnaan doonaa ugu yaraan daarad weyn. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' ayaa si dabiici ah u ilaaliya, laakiin wuxuu ka badan yahay 'dadka u janjeedha' marka loo eego noocyada kale ee ilaaliya xoolaha. Eyga Kangal ee si wanaagsan u dhexeeyaa guud ahaan kuma xadgudbo dadka, gaar ahaanna wuxuu jecel yahay carruurta — laakiin isirku ma aqoonsana soohdinta hantida. Way warwareegi doontaa, weerari doontaa eeyaha baadida ah, waxayna ku noqon kartaa dagaal aadanaha kuwa ku soo xadgudbay , gaar ahaan habeenkii. Dayrka wanaagsan sidaas darteed waa lagama maarmaan.
Noocani wuxuu ubaahan yahay jimicsi iyo kicinta maskaxda. Eeyaha shaqeeya ee leh acreage waxay jimicsi ku sameyn doonaan iyagoo kormeeraya hantida iyo ilaalinta xoolahooda. Eeyaha qoyska ayaa u baahan socod maalinle ah , orod ama orod iyo is dhexgalka bulshada oo ka baxsan hantida, maxaa yeelay haddii aysan jirin shaqo la qabto ma helayaan jimicsi maskaxeed iyo mid jidheed oo ku filan waxaana laga yaabaa inay adkaato in la maareeyo. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
5 - 10 eeyo
3 bilood jir bulldog faransiis
Noocani wuxuu u baahan yahay qurxin yar. Koodhku wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u cadayo inta lagu jiro labada jeer sanadkiiba xilliga daadinista. Waad ku baxsan kartaa adiga oo aan fiiro gaar ah lahayn sanadka intiisa kale. Eyga Kangal waa xilli xilliyeed, daadiya culus.
Dadka Turkiga ayaa sheeganaya: Eyga Kangal waa nooc duug ah oo ilaalin adhi ah, oo loo maleynayo inuu xiriir la leeyahay eeyo u eg mastiff hore oo lagu sawiray farshaxanka Ashuur. Taranka waxaa loogu magac daray Degmada Kangal ee Gobolka Sivas ee bartamaha Turkiga halkaasoo laga yaabo inuu asal ahaan ka soo jeedo. In kasta oo noocyadu ay muddo dheer la xiriireen qoyska Aga ee Kangal, dadka dhulka leh iyo madax-dhaqameedyada, haddana intooda badan waxaa ku abtirsada dadka tuulada ku nool oo aad ugu hanweyn awoodda eydu u leeyihiin inay ka ilaashadaan adhigooda adhiga iyo kuwa ariga ka soo jeeda yey, orso iyo dilaa. Go'doominta qaraabada ah ee gobolka Sivas-Kangal ayaa Eygii Kangal ka reebay kala-soocidda waxayna keentay nooc dabiici ah oo isku mid ah muuqaal ahaan muuqaal ahaan, dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba. In kasta oo asal ahaan ka soo jeedo gobolka, dad badan oo Turki ah waxay u tixgeliyaan Eyga Kangal inuu yahay eeygooda qaran. Dowladda Turkiga iyo hay'adaha tacliinta waxay ka shaqeeyaan xeryo taranta halkaasoo lagu xanaaneeyo Eyga Kangal isla markaana si taxaddar leh loo ilaaliyo farcanka. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' ayaa lagu soo bandhigay shaambadaha boostada ee Turkiga iyo qadaadiicda. Eyga loo yaqaan 'Kangal Dog' waxaa markii ugu horreysay lagu soo wariyay suugaanta canugga ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika oo ay qoreen David iyo Judith Nelson, oo Mareykan ah oo eeyaha bartay intii ay deggenaayeen Turkiga. Nelsons waxay soo dhoofiyeen Eygoodii ugu horreeyay ee Kangal ee Mareykanka 1985. Eygan, iyo soo dejintii xigtay, ayaa aasaas u sameeyay Eyga Kangal ee Mareykanka. Eyda runta ah ee loo yaqaan 'Kangal Dogs' waxay ka soo jeedaan gobolka Sivas iyo magaalada Kangal.
injirtu maxay u egtahay eeyaha
Qaar kale waxay ku andacoodaan: in markii ugu horeysay laga sameeyay galbeedka galbeedka Charmian Steele iyo kuwa kale oo ku nool Britain. Kangaliyihi ugu horeeyey waxay soo galeen England 1965. Qashinkii ugu horeeyey wuxuu dhashey 1967. Cunsuriga waxaa la oran jirey Anatolian (Karrabash) Shepherd Dog. Markii dambe, qof ayaa ka keenay Ey cunug ah oo ka yimid Anatolia oo keenay khilaaf iyo kala qaybsanaan naadiga ah, iyo kala qaybsanaan u dhexeysa Kangal (Karrabash) iyo kuwa Anatolia Shepherd Dog.
Dadka qaar waxay ku dhawaaqaan dhammaan eeyaha adhijirka Turkiga inay yihiin hal nooc, the Adhijirka reer Anatolia , si kastaba ha noqotee Eyda runta ah ee loo yaqaan 'Kangal Dogs' ayaa la sheegaa inay yihiin nooc ka duwan eyga adhijirka Turkiga ah. Dhoofinta eeyaha Kangal saafi ah ee Turkiga ayaa la xakameeyay oo hadda waa mamnuuc. Xaaladaha taariikheed ee go'doonsan ee gobolka Sivas-Kangal waxay sababeen horumarinta Eyga Kangal oo ah nooc gaar ah, oo lagu dhawaaqay inuu yahay Eyga Qaranka ee Turkiga iyo hanti qaran. Eyda runta ah ee loo yaqaan 'Kangal Dogs' waa kuwa ugu horreeya uguna horreeya ee weli shaqeeya adhijirro. Naadiga Eyga Kangal ee Mareykanka wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo yareynta xaddidaadda soo dejinta. Eeyaha la soo dhoofiyo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo aad qiimo ugu leh ku-biirintooda hida-wadaha ee Mareykanka.
KDCA = Kangal Eyga Naadiga Mareykanka
Kangal Dog oo ku yaal shaabadda boostada ee Turkiga
Kani waa shaabad turki ah oo muujineysa nooca loo jecelyahay dalka Turkiga ee loo yaqaan 'choban kopegi' (eyga adhijirka), eeyga Kangal.
Lacagta Kangal oo ay soo saartay dowladda Turkiga.
mini pinscher iyo isku dhafka dachshund
Eeg tusaalooyin badan oo Eyga Kangal ah
Sawirada Eyga Kangal 1
marka muqisho qasac tago sanduuqa whelping
king charles isbaanishka pomeranian mix
sadex midab ingiriisiga ah ee midabkeedu yahay 'springer spaniels'
cirro iyo madow weyn dane